IiWebhusayithi eziLwazi eziKhuselweyo kwiDatha yeDatha -Salal Advice
I-Web scraping, eyaziwa nangokuvuna i-web, yindlela yokusetyenziswa yokukhupha idatha iiwebhusayithi ezahlukeneyo. I-Web scraping tools ukufikelela kumaphepha ewebhu usebenzisa iProtokholi yokuTshintshiselwa kwe-Hypertext kwaye uhlalutye ulwazi oluncedo njengemigaqo yakho. Iibhokhwe okanye i-web crawlers zisetyenziselwa le njongo. Baqala ukuqokelela idatha kwaye bayigcine kwisiseko seenkcukacha. Isinyathelo esilandelayo kukuba ufumane ulwazi olunentsingiselo kubasebenzisi, kunye neefayili zokuthumela ngaphandle kwiifom ezisebenzisekayo. Abaphandi nabathengisi basebenzisa i-web scrapers ukuba bakhiphe idatha abayifunayo. Ezinye zewebhu ezidumileyo ukukhupha idatha zikhankanywe ngezantsi:
1. Iifayili zokuhamba:
Icandelo lezokhenketho liye lakhula kwiinyanga ezinje, kwaye ngoku ke yenye yezona ziqhankqalazi ezidumileyo kunye neenzuzo kwi-net. Unokwenza i-portal yokuhamba ngokulula kwaye unikeze ngeenqwelo-moya ezinqabileyo zendawo kunye namazwe ngamazwe, amahotele kunye neenkonzo zokudlulisela kubathengi bakho. Nangona kunjalo, kufuneka uqiniseke ukuba amaqhinga owenzayo aphezulu. Ngenxa yale njongo, unokudinga ukukhipha idatha kwezinye iifowuni ezidumile ezifana ne-TripAdvisor ne-Trivago. Idatha ye-TripAdvisor yaxutywa ngamaxesha amaninzi, kwaye unokukwazi ukuphuhlisa kalula iwebhusayithi yakho ngokusekelwe kwidatha yayo.
2. Iibhodi zeJob:
Ibhodi yomsebenzi yenza kube lula ngathi ukuba sifumane izikhundla ezifanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zethu kunye nemvelaphi yemfundo. Xa inkampani ibhala umsebenzi, abaviwa abanokuthi bangenise i-resumes kunye neeprofayile. Le nqubo yenziwa kuze kube yinkampani enombuzo ithola umviwa ofanelekileyo. Into ebaluleke kakhulu ukuba ibhodi yomsebenzi ifuna ukubonelela ngumlinganiselo omkhulu wemisebenzi ekubonisweni. Ngaloo ndlela, unako ukubandakanya inani elikhulu labantu kwaye ukhulise ishishini lakho. Sebenzisa i-Kimono Labs okanye Ingenisa. Ukukhupha idatha ukusuka kwiibhodi ezahlukeneyo zesebenzi kunye nokwakha iqonga apho imfuno idibana nokubonelela. Emva kokuba idatha ikhutshwe, kufuneka uyikhuphe kwi-hard drive yakho. Kwakhona, qiniseka ukuba idatha ichanekile kwaye iqulethe izethulo ezimfutshane zombini umcebisi nomsebenzi.
3. Iiwebhsayithi zeendaba:
Ukukhangela amanqaku eendaba kubalulekile ukuba sifuna ukugcina iso kwiimeko ezikhoyo. Iyiphi indlela engcono yokufumana idatha? Ungasebenzisa i-web crawler okanye i-scraper yedatha (mhlawumbi Ngenisa. io) ukukhipha ulwazi oluncedo kwiivenkile ezahlukeneyo zeendaba. I-CNN, i-BBC, kunye nezinye iindwendwe zijoliswe kwi-Import. io kunye ne-Kimono Labs. Emva kokuba umxholo ukhutshwe, unokushicilela kwiwebhusayithi yakho kwaye ngoko uphucule i-rankings yejini injini. Ngokomzekelo, ukuba ufuna amaqaku eendaba malunga neDonald Trump, uya kufumana ulwazi oluncedo kwiGoogle News. Enye yeenzuzo eziphambili zeendawo zokuhlaziya iindaba kukuba unokwenza kunye naliphi na ithuluzi kwaye awudingi izakhono zeprogram kuzo zonke. Ukuqala, kuyithuba elimnandi lokuphuhlisa ishishini labo kunye nokukhangela idatha ephezulu Source .